Karazan-damba landy isan-karazany
Raha tia lamba mihaja ianao, dia hifanaraka amin'ny landy, kofehy voajanahary matanjaka izay miteny lafo sy kilasy. Nandritra ny taona maro, fitaovana vita amin'ny landy no ampiasain'ny mpanankarena hanehoana ny saranga. Misy karazana fitaovana landy isan-karazany mety amin'ny fampiasana isan-karazany. Anisan'izany ny ...
Ahoana ny fomba hamahana ireo olana manjavona loko amin'ny landy
avy amin'ny admin tamin'ny 21-09-04
Ny faharetana, ny taratra, ny fofona, ny fihenjanana, ny tanjaka ary ny maro hafa dia azonao avy amin'ny landy. Ny lazany eo amin'ny tontolon'ny lamaody dia tsy zava-bita vao haingana. Raha manontany tena ianao na dia somary lafo kokoa noho ny lamba hafa aza io dia miafina amin'ny tantarany ny marina. Raha mbola tamin'ny andron'i China dom ...
Aiza no hividianako ondana landy?
Saron-doha landy dia manisy fahasalamana lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Vita amin'ny fitaovana malama izay manampy amin'ny fihenan'ny ketrona amin'ny hoditra izy ireo ary mitazona ny volo ho salama. Amin'izao fotoana izao, betsaka ny olona liana amin'ny fividianana ondana landy, na izany aza, izay misy ny olana dia ny mitady toerana hiantsenana ori ...
Rehefa avy nanao landy nandritra ny taona maro dia tena azonao ve ny landy? Isaky ny mividy akanjo na entam-pianakaviana ianao dia holazain'ny mpivarotra aminao fa lamba landy io, fa maninona no samy hafa ny vidiny? Inona no mahasamihafa ny landy sy ny landy? Olana kely: manao ahoana i ...
Ny fitafiana sy fatoriana amin'ny landy dia misy tombony fanampiny izay mahasoa ny fahasalaman'ny vatana sy ny hoditra. Ny ankamaroan'ireo tombontsoa ireo dia avy amin'ny zava-misy fa ny landy dia fibre voajanahary voajanahary ary noho izany dia misy ny asidra amine tena ilaina ilain'ny vatan'olombelona amin'ny tanjona maro samihafa toy ny fanamboarana ny hoditra sy ny h ...
Ahoana ny fanasana landy?
Ho an'ny fanasan-tanana izay fomba farany tsara indrindra sy azo antoka indrindra amin'ny fanasana zavatra marefo indrindra toy ny landy: Step1. Fenoy ny tavy iray <= rano matimaty 30 ° C / 86 ° F. Dingana2. Manampia tete detergent manokana. Dingana3. Avelao hilentika mandritra ny telo minitra ny akanjo. Dingana4. Alaharo ny zava-pisotro manitra manodidina ny t ...